Dhaqamada Cuba, maxay yihiin caadooyinka Cuba? | Safarka Absolut
Waxaa jira laba waji oo aasaasi ah Dhaqanka Cuba: qoyska iyo saaxiibbada. Waxay u badan tahay inay yihiin cunsurrada ugu muhiimsan dhaqanka iyo dhaqanka waddankan waxaan ku imid farxad iyo midab. Dabaaldegyo ka dhacay Cuba Fasaxyada waxaa ka mid noqon kara kooxo badan oo dad ah oo dhammaantood wada dhaqan ah.
1 Gastronomy ee bulshada Cuba
2 Caadooyinka Cuba
3 Isboorti loogu talagalay dadka reer Cuba
4 Caadooyinka Cuba
5 Dhaqanka oo qayb ka ah caadooyinka Cuba
Gastronomy ee bulshada Cuba
Dabcan cuntada aad ayey muhiim ugu tahay caadooyinka Cuba, halka aroosyada Cuba aaney inta badan ka duwaneyn dhaqamada kale ee reer galbeedka marka laga reebo dhowr khilaafaad yar.
In Christmas tusaale ahaan, dadka reer Cuba badanaa waxay ku dabaal degaan shir qoys halkaas oo xubnaha qoyska oo dhami ay joogaan. Sidaa darteed, waxay u muuqdaan inay yihiin shirar aad u ballaaran. Sidaan horeyba u sheegnay, cunnadu waa qayb aasaasi ah caadooyinka bulshada Cuba.
Mid ka mid ah suxuunta dhaqanka inta lagu jiro waqtigan waxay leedahay hilibka doofaarka maadada ugu weyn. Xayawaanku waxaa loo diyaariyaa laba maalmood ka hor si loo hubiyo inuu diyaar u yahay taariikhda la tilmaamay iyo inay jiri karto cunto ku filan qof walba. Macmacaanku sidoo kale waa a caadada Cuban Christmas-kaSi kastaba ha noqotee, waddankan isweydaarsiga hadiyadeed ee caadiga ah badanaa lama fuliyo mana tixraacno Santa Claus.
Ku saabsan dhaqanka sanadka cusub ee CubaWaxa caado ah in laga takhaluso waqtiyadii xumaa ee sanadkii hore si sanadka soo socda aad looga dhigo mid aad u wanaagsan. Sababtan awgeed, qaab astaamo ah, dadka reer Cuba badanaa waxay gubaan doll habeenka cusub ee sannadka cusub iyagoo matalaya ciribtirka wax kasta oo xun oo dhacay sannadka dhexdiisa.
Sidoo kale waa wax iska caadi ah halkii laga heli lahaa guba caruusad, Kuubaanka garbahooda biyo ayey ku daadiyaan si ay uga takhalusaan nasiib xumada una soo jiitaan barwaaqo. Ku rashyo Waxay sidoo kale caado u yihiin Cuba inta lagu jiro dhamaadka sanadka si loogu dabaaldego waqtiyada wanaagsan ee soo socda. Dabcan ma diidi karno inaan xusno caadooyinka cunnada ee Cuba, halkaas oo qaababka wax lagu kariyo ee ay ku jiraan suxuunta ay ku jiraan xawaashku sida toonta, kuum iyo oregano ay inta badan ka muuqdaan.
Sidoo kale waa wax caadi ah in la isticmaalo cabitaanka miraha sida marinade, laakiin shaki la'aan mid ka mid ah hababka ugu caamsan ee karinta dhaqanka Cuba waa dubista. Marka laga hadlayo salaanta, waa wax iska caadi ah in ragga Cuba ay isku salaamaan isgacan qaad, halka dumarku inta badan dhabanka ka dhunkadaan. Si loo macasalaameeyo, dadka reer Cuba badanaa waxay adeegsadaan tibaaxyo ay ka mid yihiin nabadeey o nabadeey.
Isboorti loogu talagalay dadka reer Cuba
Ku saabsan ciyaaraha iyo madadaalada Cuba, shaki kuma jiro in baseball-ka uu ka mid yahay waxyaabaha uu jecelyahay. Xaqiiqdii, waa la ogyahay in dadka Cuba ay bilaabaan inay ku tababaraan ciyaartan iyagoo aad u da 'yar sidoo kale waxaa lagu dhigaa iskuulada Sababtaas awgeed, maahan wax la yaab leh in la ogaado in magaalo kasta oo Kuuba leedahay koox baseball u gaar ah. Runtiina waa ciyaartoy weyn oo baseball ilaa heer ay in badan oo ka mid ahi xilligan ka ciyaaraan Horyaalka Kubadda Koleyga Mareykanka.
Feedhka, dabaasha, baaskiil wadista, iyo sidoo kale kubbadda koleyga iyo kubbadda laliska waa hawlo kale oo dhaqameed isboorti oo ka socda Cuba. Cubans-ku aad bay ugu wanaagsan yihiin cayaarahaan oo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin awood caalami ah cayaaraha Olombikada maadooyinkan, waana sababta ay had iyo jeer u helaan bilado badan inta ay kaqeyb galayaan.
Sida Caadooyinka Cuba ee ku saabsan xafladaha sida aroosyadaKuwa raba inay la ciyaaraan caruusada waa inay lacag gashadaan labiskeeda ka hor inta aysan la ciyaarin. Aroosadda ama aroosku waxay u mahadcelinayaan martida inay goobjoog ka ahaayeen munaasabaddaas qaaska ah iyagoo siinaya hadiyado yaryar oo astaamo ah.
Sidoo kale waa in la sheegaa in Cuba ay caan ku tahay kala duwanaanta dhaqameed maadaama ay leedahay saameyn Isbaanish, Faransiis, Afrikaan iyo Aasiya ah. Tani waxay u saamaxday Cuba inay heer sare ka gaaraan dhinacyada kala duwan sida farshaxanka, suugaanta, baleedka ama qoob ka ciyaarka casriga ah, xitaa tiyaatarka. Dabcan, muusiga Cuba wuxuu door aasaasi ah ka ciyaaraa dhaqanka iyo hiddaha Cuba. Waxay ahayd Cuba halkaasoo heesaha muusikada ee xiisaha leh ay u soo baxeen sida wiilka, Danzón, bolero, Cha Cha Cha ama Mambo.
Dhaqanka oo qayb ka ah caadooyinka Cuba
Hadana hadaan kahadalno khasnadaha dhaqanka, Dhismayaasha la soo rogay ee xilligii gumeysiga ayaa ka sarreeya wax walba, in badan oo ka mid ahna ay hadda ku dhawaaqday inay yihiin Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Meelaha sida Xarunta taariikhiga ah ee Old Havana iyo Fort; ah Magaalada qadiimiga ah ee Trinidad, warshadaha sonkorta ee Trinidad ama qalcadaha San Pedro de la Roca del Morro, sidoo kale waxay ka mid yihiin dhaqanka iyo hiddaha Cuba.
Shaki la'aan, kani waa waddan aad ku raaxeysan karto sheeko xariirooyin iyo soojiidasho aan la mid ahayn, dadkuna had iyo jeer diyaar u yihiin inay caawiyaan, ku farxaan iyo caadooyin badan oo Cuban ah oo lagu raaxeysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhaqamada Cuba
maira Alexandra Ibáñez Lara dijo
Waan jeclahay caadooyinka Cuba, salaantu waa mid ixtiraam leh isboortiga awgood waan jeclahay dhamaantood laakiin kan aan ugu jeclahay ayaa ah qoob-ka-ciyaarka
Jawaab ugu dir maira alexandra ibañez lara
Waa hagaag Cuba waa wadan balaaran, waa nuqul fiican my msn oo igu dar markaa waxaan uga wada hadli doonaa si degan
Jawaab ku bixi starlinjaviel jimenez montan
Waa hagaag Cuba waa waddan ballaadhan, waa nuqul wanaagsan my msn oo igu dar markaa waxaan si xasiloon ula hadlaynaa oo aan nuqul ka qaadan doonnaa waxay aaminsan tahay Ilaah inuu isagu yahay badbaadiyaha keliya
Marka laga hadlayo caadooyinka Cuba, mid ka mid ah waa cuntada iskeed isu dareento wax badan, waana:
1. Bariis bunni ah ama congris
3. Bariis leh ukunta omelette
4. Muuska, taro, baradhada macaan (kuligood waa la shiilay ama la kariyey) iyo yuca (oo lagu kariyey mojo)
Waa hagaag, anigu waxaan ahay kalabar Cuba iyo Peruvian, dalkaygu waa Cuba iyo Maajo waa Peruvian, laakiin waxaan ka qaadaa dhiig Kuuba taasina waa 100pre na ke see laakiin waxaan ka socdaa halkaas
Ku jawaab aldo
Waxaan jeclahay Cuba kaliya cuntooyinka
ugu dambayn waa maxay caadooyinka
RUTH ADELAIDA CEDEÑO Miisaska dijo
WAAN JECLAHAY DIGNIINTA SHACABKA CUBAN WAANA KU RAJEYAY IN AAN OGAADO MAALIN MAALIN WAAN KU JECLAHAY CUBAN, SI AAN UGU SAMEEYO DHAMMAAN DADKA AKHRIYA
Ku jawaab RUTH ADELAIDA CEDEÑO CUADROS
CUBA HA NOOLAATO WAAN RABAA LAGA YAABAA INAAN KU FIKRO IN KA BADAN DADKA MICHAS, MA FAHMO AMA Waxaan RABAA IN LAGU SAMEEYO
Alexander bastida Hernandez dijo
Waan jeclahay Cubaaaaaa
Ku jawaab alexander hernandez bastida
Maxay dhalinyarada ka sameynayaan Cuba?
Jawaab Ana Carolina
In kasta oo aanu ahayn waddan aad u horumarsan, haddana wuxuu leeyahay qiime aan daal lahayn oo ah bini-aadamnimada oo qof walba oo Cuba ah waa inuu dareemaa inuu ku qanacsan yahay inuu ku dhashay dal sidan u qurux badan oo taageero leh.
Jawaab yadrian gonzalez
8 meelood oo Kareebiyaanka ah oo ay tahay inaad ogaato
Maxaa lagu arkaa Almuñécar, Xeebta Kulayl ee Granada